ब्राजिललाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि – Sandesh Press
अर्जेन्टिनालाई उपाधि दिलाउनको लागि विंगर एन्जल डी मारियाले गोल गरे । उनले खेलेको २२ मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको सुरुवाती समयमा ब्राजिलले केहि आक्रमण बुनेपनि गोल गर्न सकेन ।
Prevदुखद खबर: रहिनन् ट्याक्सि ड्राइभर कर्णराज गिरिकी आमा, अधुरो भो छोरोलाइ भ्वाइस जिताउने सपना !
Nextआज देशका यि स्थानमा दिनभभरि भारि वर्षा हुने, सबैमा सर्तक रहन माैसम विभागकाे आग्रह !
ज्वरो र रुघाखोकी आइ अस्पताल पुगेका एकै समुदायका ९ जनाको मृत्यु